Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Farafahakeliny olona 27 no maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny sambo anglisy Channel
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Cruising • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Betsaka kokoa ny mpifindra monina tsy ara-dalàna nandao ny morontsiraka avaratr'i Frantsa noho ny mahazatra mba hanararaotra ny toetry ny ranomasina milamina ny alarobia, na dia nangatsiaka mafy aza ny rano.
Nitombo be ny isan'ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna mampiasa sambo kely na sambokely hiampitana ny Lakandrano anglisy amin'ity taona ity, na dia eo aza ny loza ateraky ny loza an-dranomasina.
Araka ny filazan'ny polisy frantsay sy ny tompon'andraikitra ao an-toerana, farafahakeliny 27 no maty tamin'ny loza farany teo, raha nanandrana niampita ny Lakandrano anglisy avy any Frantsa nankany Angletera rehefa rendrika tany amin'ny morontsiraka avaratr'i Angletera ny sambo kelin'izy ireo. Calais, Frantsa.
Ny ben'ny tanànan'i Calais, Natacha Bouchart, dia nilaza androany fa tafakatra 27 ny isan'ny maty nilentika, minitra taorian'ny nametrahan'ny ben'ny tanàna hafa ny isa ho 24.
Nilaza ny polisy frantsay fa farafahakeliny 27 no maty.
Franck Dhersin, lefitry ny lehiben'ny fitaterana faritra sady ben'ny tanànan'i Teteghem any amin'ny morontsiraka avaratr'i Frantsa dia nilaza fa nahatratra 31 ny isan'ny maty ary olona roa no tsy hita popoka.
The UNNy Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fifindra-monina dia niantso an'io tranga io ho fatiantoka tokana lehibe indrindra tao amin'ny Channel English hatramin'ny nanombohan'izy ireo nanangona angona tamin'ny taona 2014.
Niantso ny mpamonjy voina ny mpanjono iray rehefa nahita sambokely iray tsy nisy na inona na inona sy olona nitsingevana tsy nihetsika teo akaiky teo.
Sambo telo sy helikoptera telo no napetraka handray anjara amin’ny fisavana, hoy ny tompon’andraikitra any an-toerana.
Ny praiminisitra Frantsa Jean Castex dia niantso ilay sambo nivadika ho "loza".
"Ny eritreritro dia miaraka amin'ireo olona maro tsy hita sy naratra, niharan'ny mpanao heloka bevava an-tsokosoko izay manararaotra ny fahoriany sy ny fahoriany," hoy izy nisioka.
Ny praiminisitra UK Boris Johnson dia nilaza fa "taitra sy tohina ary nalahelo mafy noho ny famoizana aina".
“Ny eritreritro sy ny fangorahako dia ireo niharam-boina sy ny fianakaviany ary ao anatin'ny zavatra mahatsiravina no niaretany. Saingy ity loza ity dia manasongadina ny maha-doza ny fiampitana ny Lakandrano amin'izany fomba izany, ”hoy izy.
Nivoady i Johnson fa ny governemantany dia “tsy hamela na inona na inona handrava ny tolo-kevitry ny raharaham-barotra ataon'ireo mpanao trafikana olona sy ireo jiolahy”, rehefa avy nitarika ny fivorian'ny komity vonjy maika an'ny governemanta momba ny fiampitana izy.
Ny alarobia teo dia nilaza ny minisitry ny atitany frantsay fa nahitana vatana mangatsiaka dimy ary dimy hafa tsy nahatsiaro tena tao anaty rano taorian'ny fampitandreman'ny mpanjono iray.
Tonga ny zava-nitranga rehefa nitombo ny disadisa teo amin'i London sy Paris momba ny isan'ny mpifindra monina miampita ny Channel.
Nitombo be ny isan'ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna mampiasa sambo kely na sambokely hiampitana ny Lakandrano amin'ity taona ity, na dia eo aza ny loza mitatao.
Araka ny filazan'ny tompon'andraikitra UK dia olona maherin'ny 25,000 no tonga hatreto amin'ity taona ity, efa avo telo heny ny isa voarakitra tamin'ny taona 2020.
Nanentana an'i Frantsa i Grande-Bretagne mba handray fepetra henjana kokoa amin'ireo mitady hanao ilay dia.